Indlela yokufaka lokugeza izandla
Kuleli qophelo embhalweni esitolo zokugeza bonke bathanda, zingenziwa materials ezibizayo noma eshibhile. Ngokuvamile, izinga izinto akuyona kubaluleke njengokugwema ngokubukeka ubukhulu yokugezela. Nokho, ngisho esimweni ukuthengwa amahle kakhulu futhi ukhululekile, nizitholele umbuzo obalulekile mayelana nendlela ukufaka okugeza. Isimo eziyinkimbinkimbi, uma umuntu angenakho uthemba ochwepheshe, futhi ufuna ukwenza konke bebodwa, bese wonke umuntu olandela eminye yemigomo yakhe kahle ichazwe.
Bath itholakala njalo efulethini, ngenkathi ngokuvamile ezahlukene design ngokwanele ezikhangayo. Ngaphambi kanjani ukufaka amanzi okugeza kufanele ichaze impahla kumele abunjwe ngalo, njengoba okwamanje ibhekwa njengeBhayibheli steel efaneleke kakhulu, waphonsa yensimbi kanye Plastics. Ngamunye wabo ngebuhle nebubi. Ngokwesibonelo, insimbi quality enhle kakhulu, banayo eminyakeni qinani ukubukeka kwabo, kepha ethile yabo eyinhloko ukuthi zingabantu ngokuvamile ukuzilimaza ukufaka akunakwenzeka ngenxa isisindo omkhulu. ukwakhiwa Steel ukufaka lula kakhulu, kodwa degree of amandla banayo iyafana cast iron. Nokho, ezinjalo ephansi ukwahlukanisa yokugezela, futhi lapho ethola ushaye amanzi, kwenza komsindo. imikhiqizo Acrylic unawo wonke pluses kanye minuses kwezinhlobo ezimbili ezidlule, kodwa kulokhu izindleko kakhulu.
manje Ungaya umbuzo kanjani ukufaka okugeza? Ngokuvamile, basuke ogibele imilenze lapha kubalulekile ukwenza eyehlelayo encane evumela amanzi kukhiqizwe ngendlela engokwemvelo. Kungenjalo amanzi ahlale kulo, kudingeka uthele izindlela ezinye. Ezansi isethwe ukukhululwa, okuyinto ohlanganiswe USiphon, nangaphandle qiniseka ukusetha zichichima. Leyo mikhumbi amazwe USiphon efanelekayo ngokuvamile iza ubhavu. Uma sikhuluma kanjani ukufaka okugeza, khona-ke kufanele kuqashelwe ukuthi kuqala kumele ufake ohlangothini olulodwa, bese ukhuphule USiphon phansi futhi zichichima. Nokho, Ngaphezu kwalokho, kungcono ukubeka izinyawo zakho ku izindawo ezilungile, okuyinto ungakwazi ukufaka okugeza, kuyadingeka ukubeka ngendlela yokuthi lapho uphuma khona kwaba ngo ipayipi, okuholela amapayipi. Ngemva kwalokho ungakwazi ukufaka ku ipayipi amapayipi kokuphuma amajika.
I okugeza kungcono ukuhambisa eduze ngangokunokwenzeka odongeni, bese ukwenza emthambekeni ohlangothini nomfula. Ukulungisa ukuthambekela angenziwa amapuleti steel, ukhuni noma zepulasitiki, kumele afakwe ngaphansi okugeza izinyawo. Ngaphezu kwalokho kungenzeka ukuvala ngokuhlanganyela USiphon amapayipi futhi kudinga igebe encane phakathi okugeza futhi udonga kufanele kube uqweqwe ukumboza ngu usimende. Lapho seyomile, lezi amasayithi kudingeka ukumboza ngamafutha upende. Uma unesithakazelo kokufaka kubhavu ashisayo, isimo fanekiso ngokuphelele. Uma efulethini usetshenziswa mixer ukufeza lo msebenzi nakubhavu nokucwila, kubalulekile ukwenza amabhodi kuyendlulela okungenani 8 amasentimitha, okuyinto ungavumeli amanzi igeleze aphume phakathi inkinobho. Uma abathintekayo isitshalo ekhoneni okugeza, bese lapha kubalulekile ukuphawula ukuthi ukufakwa yayo akuyona okuningi ezahlukene kusukela ukufakwa evamile. Kuyinto kuphela ukuqinisekisa ukuthi i-engeli lapho efakwe, kuyavumelana ngokuphelele nalo.
Ngakho, manje wena ukwazi indlela ukufaka okugeza, ihlala yodwa luqhephuke phansi ukukwenza.
Fiberglass ukuqinisa: amaphutha izici, isicelo
Yikuphi phansi ephasishi ukuyenza? izeluleko kongoti kanye nokubuyekeza materials
Ukudweba "Caparol": izakhiwo Palette, ukubuyekezwa
PVC ophahleni panel ngezandla zabo. PVC ophahleni panel: ukufakwa
Izindandatho "Bulgari" - obugagu abayitoho
Yini ukuba bangadli umdlezane ukuba umntanakhe kahle?
Amandla angaphakathi wezindaba
Ukwazi izimpawu zokuqala ezibonisa bayasangana, ungasiza imithi
Siyakuhalalisela amahle umshado abazali
Yini okufanele ngiyenze uma izingalo ilinyazwe umunwe?
Yini stylistically ezinemibala amazwi? Umbala wesitayela
UGurov Alexander Ivanovich: biography, isithombe
Izithelo maniola: izakhiwo ewusizo futhi izicelo